बिहानैदेखि निषेधाज्ञामा थप कडाइ, के-के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाइँदैन ?(सूचीसहित)
प्रकाशित : 8:42 am, शुक्रबार, जेठ १४, २०७८
काठमाडौं । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा आजदेखि थप कडाइ बनाइएको छ । यसैसाता उपत्यकाका तीनै जिल्लाका सीडीओहरुको बैठकले जारी निषेधाज्ञा एकसाता थप्दै जेठ २० गतेसम्म लम्ब्याइउने निर्णय गरेका थिए ।
आज विहानैदेखि प्रहरीले सवारी आवतजावतमा कडाइ गरेको छ । तोकिएका बाहेक गुडेका सवारीलाई बाटोमै होल्ड गरेको छ ।
यसपाली किराना पसल पनि बन्द गरिएको छ । बिहानी बेलुकाको घुमघाममा समेत रोक लगाइएको छ । निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक खाद्य सामग्री (तरकारी, फलफूल, दूध, डेरी, मासु, खानेपानी र ग्यास) खरीदविक्रीका लागि बिहान ९ बजेसम्म खुला रहने भएको छ । यसअघि बिहान १० बजेसम्म खुला गरिएको थियो । अहिले थपिएका समयमा भने खाद्यान्न, किराना पसल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर्सलगायत अन्य पसल सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।
सबै प्रकारका भिडभाड हुने गतिविधिमा रोक लगाइएको छ । उक्त अवधिभर सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालीम, सेमिनार, सिनेमा हल, डान्सबार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, शपिङ मल, मनोरञ्जनस्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लव, फुटसल, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकूद, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना, दर्शकसहितको खेलकुद सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
औषधी, तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरीदका लागि बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्किन पाउने छैन । अत्यावश्यक काममा निस्किँदा पनि दुई व्यक्तिबीच कम्तिमा दुई मिटरको दुरी कायम गर्नुपर्ने छ । अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्न, पटकपटक साबुन पानीले हात धुन र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने छ । सार्वजनिक एवम् निजी सवारी साधन पनि सञ्चालन गर्न पाइने छैन । अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका सवारी साधन, विरामी तथा कुरुवा ९बढीमा २ जना० बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन मात्रै सञ्चालन हुने छ ।
यस्ता छन् गर्न पाइने र नपाइने काम
« बाध्यात्मक अवस्था छैन, अध्यादेशबाट बजेट नल्याऊ : योजना आयोगका ९ पूर्वउपाध्यक्षहरु
एकतिहाई सिमेन्ट उद्योग बन्द, माग नहुँदा अर्बौंको सिमेन्ट गोदाममै थन्कियो »